“အတွေးစလေးတွေ”: March 2013
ဦးဟန်ကြည်တို့တစ်တွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ကြည့်ရင်တော့ ထင်တစ်လုံးနဲ့ ဘ၀င်နှလုံးမှာ ရွှင်ပြုံးနေကြတဲ့ လူတွေချည်းပေါ့။ ငါမှငါ၊ ငါဟာ အတော်ဆုံး၊ ငါဟာ အတတ်ဆုံး၊ ငါပဲ စိတ်ကောင်းရှိတယ်၊ ငါပဲ ဘာသာရေးသမား၊ ငါလိုလူ ဇမ္ဗူရှား၊ အောင်မယ်မင်း ကိုယ့်ကောင်းကွက်တွေသာ ချရေးပြီး စာရင်းလုပ်ကြည့်ရင် ဘုရားစင်ပေါ်က ရုပ်ပွားတော်ဘေးမှာ ကိုယ့်ပုံကိုတောင် ရုပ်တုထုပြီး ကိုးကွယ်ချင်စရာတောင် မကောင်းပေဘူးလား။
ကိုယ့်လုပ်ရပ်၊ ကိုယ့်စိတ်ဓာတ်တွေကို နတ်မျက်စိ ပုလင်းကွဲနဲ့ အတင်းဖြဲမကြည့်ဘဲ သာမန် မံသစက္ခုနဲ့ တစ်ချက်လောက်ရှုလိုက်ရုံနဲ့တင် တလွဲဆံပင်ကောင်းနေတာတွေမှ တပုံတခေါင်း။ ကာတွန်းဦးဘဂျမ်းရဲ့ဇာတ်ကောင် ရသေ့ကြီးဦးဖျောက်ဆိတ်ရဲ့ စကားလုံးကို အငှားသုံးပြီး ပြောရရင်တော့ ဦးဟန်ကြည်တို့ရွှေပြည်သားတွေက “ ကိုယ့်ပေါင်ကိုလှန်ထောင်းတဲ့ ၀ါဒီ ” တွေကိုး။ ကိုယ့်ပေါင်ကိုတော့ ခပ်ဖွဖွလေးထောင်းပြီး သူများပေါင်ကိုတော့ မညှာမတာ စွတ်စွက်ထောင်းချင်တာကိုက သမိုင်းပေးအမွေ။ သူများကိုတရားချဖို့များဆိုရင်တော့ ရွှန်းရွှန်းကိုဝေလို့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုများကျတော့ အသေးအဖွဲကလေးတောင်မှ ခွင့်မလွှတ်နိုင်၊ မဖြေနိုင်ကြတာတွေမှ ဒုနဲ့ဒေး။ ဖတ်ဖူးတဲ့ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကို ဥဒါဟရုဏ်ဆောင်ရရင် တစ်ခါသားမှာ ဒကာမတစ်ယောက်ရဲ့ သမီးဆုံးတော့ ရွာဦးဘုန်းကြီးက တရားနဲ့ဖြေဖို့ ဖျောင်းဖျနားချတော်မူသတဲ့။ ဆရာတော်တရားပြကောင်းတော်မူတော့ ဒကာမလည်း စိတ်ပြေရှာတာပေါ့လေ။ တစ်ရက်သားတော့ ရွာဦးဘုန်းကြီးရဲ့ မယ်တော်ကြီး ပျံတော်မူပါလေရောလား။ အနှီမှာတင် ဆရာတော်ကြီးခမျာ ယူကြုံးမရ အပူလုံးကြွပြီး မဖြေနိုင်အောင် ဖြစ်တော်မူရှာပါလေရော။ သမီးဆုံးသွားတဲ့ ဒကာမကြီးက မနေနိုင်တော့တာကြောင့် ဆရာတော်ဆီလာပြီး “ ဘုန်းဘုန်းရယ် တပည့်တော် သမီးဆုံးတော့ ဘုန်းဘုန်းတရားပြသေးတာပဲ အခု ဘုန်းဘုန်းရဲ့ မယ်တော်ကြီး ပျံတော်မူတာလည်း တရားနဲ့ ဖြေမှပေါ့ဘုရား ” လို့ စေတနာကောင်းနဲ့ လာလျှောက်တော့ ၀မ်းနည်းစိတ်နဲ့ မျက်ရည်လည်ရွှဲဖြစ်နေတဲ့ ရွာဦးဘုန်းကြီးက “ ဟဲ့ ဒကာမကြီးရဲ့ နင်က သမီးပဲ ဆုံးတာ…ငါဆုံးတာက ငါ့အမေအရင်းကြီးဟဲ့ ” လို့ ၀မ်းနည်းပက်လက် ပြန်ပြောပါရောလား။ အင်း ဦးဟန်ကြည်တို့တတွေလည်း ထစ်ခနဲရှိရင် “ ငါ့အမေအရင်းကြီးဟဲ့ ” ဆိုတဲ့ ၀ါဒကြီးပဲ လက်ကိုင်ထားကြတာ မဟုတ်ပါလား အရပ်ကတို့ရေ။
ကမ်းလင့်သောလက် တွဲဆက်စေ . . .
ဒါတင်ဘယ်ကဦးမလဲ ဘာသာရေးမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်ရင် ကိုယ်မှ ဘာသာရေးသမား ကျန်တဲ့လူတွေကတော့ ငရဲသွားရမယ့် သတ္တ၀ါတွေလို့ လိုရာဆွဲပြီး သတ်မှတ်ပစ်လိုက်ချင်တဲ့ သောက်ကျင့်ကလေးကလည်း သင်းပါဘိသနဲ့။ ဘုရားမသွား၊ ကျောင်းမတတ်၊ ဘုရားကျောင်းမရောက်တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုများတွေ့လို့ကတော့ ငရဲသွားမယ့် ငရဲသားကလေးဟဲ့…ဘုရားသခင်ရဲ့ ဒဏ်ခတ်တာ ခံရမယ့် ငမိုက်သားကလေးဟဲ့လို့ နာမည်က တပ်လိုက်ချင်ကြသေးတာကလား။ ဘုရားသွားကျောင်းတက်လုပ်ရုံနဲ့သာ နိဗ္ဗာန်ရောက်၊ ကောင်းကင်နိုင်ငံတံခါးခေါက်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဦးဟန်ကြည်ကတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းဝန်းထဲမှာ တဲထိုးနေပြီး ရုပ်ပွားတော်ကို ဖက်တောင်အိပ်လိုက်ချင်သေးရဲ့။ ဦးဟန်ကြည် သဘောကျတဲ့ ဓမ္မတေးတစ်ပုဒ်ထဲမှာ “ ဟိုမှာကြည့်ပါ လူတစ်ယောက်ဟာ အရက်မူးပြီးလဲတယ်…မမူးသူတစ်ယောက်ဟာ သူ့စိတ်ထဲမှာ အရက်ထက်ဆိုးတာတွေ ” ဆိုတဲ့ စာသားကို စဉ်းစားသာကြည့်ပေရော့။ ဦးဟန်ကြည်တို့လူမျိုးက အပြင်ပန်းအမြင်နဲ့ အရေပြားတစ်ထောက်စာကို အင်မတန်ရှေ့တန်းတင်တဲ့လူစား။ အနှီ အာရှယဉ်ကျေးမှုကြီးကို ဦးဟန်ကြည် မြင်ပြင်းကတ်လိုက်သမှ ဟိုဘက်တောင်လွန်ပါလေရော။ Antonio Bandres ပါတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားမှာ “ ဘာသာရေးဆိုတာ တိုင်းတာရမယ့် ပေတံမဟုတ်ဘူး…လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့် ကျင့်ဝတ် ” လို့ ပြောလိုက်တာများ ဘ၀င်ခိုက်လွန်းလို့ ဦးဟန်ကြည်နားထဲက အခုထိမထွက်ပေါင်ဗျာ။
ကိုင်း ဟုတ်ပါပြီဗျာ။ “ တရားဖက်တော့ အမျက်ပြေ၊ ဘုရားဖက်တော့ အသက်ရှည် ” ပါသတဲ့။ တွေ့ကရာရှစ်သောင်း ဂါထာပေါင်းတွေကို ထောင်းလမောင်းကျေအောင် ရွတ်ဖတ်သရစ္ဇျာယ်နေတဲ့ အဘယ်သို့သော သူတော်ကောင်း သူမြတ်လောင်းမှာများ ဒေါသနည်းတော်မူပါလိမ့်။ “ သြကာသ…သြကာသ…ဟဲ့ မသာမ အခုထိအိပ်ရာမထသေးဘူးလား ” မလုပ်ရုံတမည်။ အနှီကြားထဲမှာ ရလိုမှုအတွက်နဲ့ ဘာသာတရားကို ချည်းကပ်ပူဇော်တာကို ဦးဟန်ကြည် မုန်းလိုက်ပါဘိတော့။ ဈေးသည်များ မနက်ဖက် ဆိုင်ဖွင့်ရင် ဂါထာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်ကို ပါးစပ်က အမြှုပ်ထွက်မတတ်ရွတ်၊ ဟိုရေမန်း သည်ရေမန်းတွေ ရွှဲရွှဲစိုအောင်ဖြန်း၊ အမွေးတိုင်ပေါင်းများစွာကို ပန်းနာသည် အသက်ရှူကြပ်ပြီး သေလုနီးပါးထွန်းနေတာကို ဘာသာရေး လုပ်တယ်လို့များထင်နေကြရင်တော့ ပါစင်အောင် လွဲပေလိမ့်။ အနှီလိုလူမျိုးက သူကမှ ရှင်တော်ဘုရားကို တကယ်ကြည်ညိုတာလို့များ ဦးဟန်ကြည်ရှေ့မှာ ပါးစပ်က တစ်ခွန်းထွက်ကြည့်။ စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ ဖင်ပိတ်ကန်မိမှာ သေချာသပါ့။ တကယ်ဆိုရင် စစ်မှန်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာ ရလိုမှုတစ်ခုတောင် မပါရေးချမပါ။ တကယ်ဆိုရင် ဘုရားရှင်ရဲ့ မွန်မြတ်တဲ့ စိတ်ထားကို လေးစားလို့ ချစ်မြတ်နိုးတာပဲ ဖြစ်သင့်တာကလား။ အနှီတော့လည်း လိုချင်လို့ ချည်းကပ်တာနဲ့ လေးစားမြတ်နိုးလို့ ကိုးကွယ်တာကြားမှာ အ၀ီစိတစ်ခုစာတောင် ခြားပါသဗျား။
ဦးဟန်ကြည်တို့က ပုထုဇဉ်တွေဆိုတော့ ဥမ္မတ္တကော ဖြစ်တာမဖြစ်တာ အသာဘေးချိတ်ပြီး ဘုရားတွေး မတွေးဘဲနဲ့ လူတွေးပဲ တွေးကြည့်ကြပါစို့ရဲ့။
ဦးဟန်ကြည်က တွေ့တိုင်း လက်ဖက်ရည်တိုက်လို့ ခင်ပါတယ်ဆိုမှတော့ ဦးဟန်ကြည်ကို ခင်တာမှ မဟုတ်ပဲ။ လက်ဖက်ရည်ကို ခင်တာပဲ မဟုတ်လား။ အနှီလိုပဲ ဘုရားဆီက တစ်ခုခု ရချင်လို့၊ တစ်ခုခုရလို့ ဘုရားကို ချည်းကပ်တယ်ဆိုမှတော့ အနှီသကောင့်သားက ဘုရားကို ကြည်ညိုတာ ဘယ်ဟုတ်လိမ့်တုန်း။ ဘုရားဆီက ရမယ့် အကျိုးအမြတ်ကို ဈေးတွက်တွက်ပြီး ရှင်တော်ဘုရားကို စီးပွားရေးပေါင်းပေါင်းတဲ့ လူပေပဲ။ ဦးဟန်ကြည်ရဲ့ ဖေဖေ့စကားကို အလျဉ်းသင့်လို့ အငှားသုံးပြီး ပြောရရင်တော့ “ အားကိုးရလို့ ကပ်ပါ၏ ” ပေါ့လေ ဟုတ်ဘူးလား။ လူလိုပဲ ဆက်တွေးကြဦးစို့ရဲ့။ ဦးဟန်ကြည်ဆီက လက်ဖက်ရည်သောက်ရလို့ ခင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ လူစားမျိုးကို ဦးဟန်ကြည်က ခင်ပါ့မလား။ ကိုယ့်ကိုခင်တာမဟုတ်ဘဲ၊ လက်ဖက်ရည်ကို မင်တဲ့သကောင့်သားကို ဖနောင့်နဲ့ ပေါက်မထုတ်တာ ကံကောင်း။ သို့ပေမင့် ဘာသာတိုင်းရဲ့ ဦးစီးအထွဋ်အထိပ် ဘုရားများကတော့ သဘောကောင်းတော်မူကြတာကိုး။ ခန္တီပါရမီများလည်း ပြည့်တော်မူကြပါရဲ့။ လိုချင်လို့လာတောင်းလည်း ဘေးမယ့်ပေးတော်မူလိုက်ကြတာချည်း။ အနှီအချက်တစ်ခုနဲ့တောင် ရှင်တော်ဘုရားတိုင်းကို ဦးဟန်ကြည် လေးစားလိုက်ပါဘိတော့။
ဒါတင်ဘယ်ကလိမ့်တုန်းဗျာ။ ကိုယ်မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်များရှိရင် ဘုရားကို ဆုတောင်းပြီး အလုပ်အပ်လိုက်ချင်ကြသေးတာရယ်။ အောင်မယ် သင်းတို့က ဘုရားကို အလုပ်သမားများ မှတ်နေရော့သလား မသိပေါင်ဗျာ။ ကိုယ်တောင်မှ မလုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်ကို ဘုရားကို အငှားခိုင်းတဲ့လုပ်ရပ်ကတော့ ရက်စက်ရာ ကျလွန်းလှချေရဲ့။ ကိုယ်သွားမယ့်လမ်းမှာ ကျောက်တုံးတစ်တုံး ခံနေတာမြင်လို့ “ မြတ်စွာဘုရား ဘုရားတံခိုးတော်နဲ့ အနှီကျောက်တုံးကို ရွှေ့ပေးတော်မူပါဘုရား ” လို့ဆုတောင်းတာ တစ်နည်းအားဖြင့်တော့ “ ဘုရား ” လို့ခေါ်ပြီး ညာခိုင်းတာ မဟုတ်လို့ ကျန်တာဘာရှိသေးလို့တုန်း။ အောင်မယ် ဦးဟန်ကြည်က အနှီလိုပြောတော့ လာဦးမယ် “ အနှာက အားကိုးတာပါဆရာရယ် ” လို့။ အနှီလိုအားကိုးလို့ ရစတမ်းဆိုရင် ဦးဟန်ကြည်လည်း အစ်ကိုတော်၊ အစ်မတော်တို့ကို အားကိုးလိုက်ပါဦးမဗျား။ Land Cruiser ငါးစီးနဲ့ Marcedes တံခါးခြောက်ပေါက် သုံးစီးလောက်ရအောင် ကူညီတော်မူပါး) သေချာပြန်စဉ်းစားကြည်ရင် ကောင်းကင်နဲ့ မြေကြီးကို ဖန်ဆင်းတော်မူတဲ့ ဘုရားရှင်က အမောင်တို့၊ အမယ်တို့ကို ခြေနှစ်ချောင်း၊ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ မတ်တတ်သွားနိုင်အောင်၊ သတ္တ၀ါတွေထဲမှာ ဦးဏှောက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဖန်ဆင်းတော်မူပေးထားတာတောင်မှ မတင်းတိမ်နိုင်၊ ပေးသနားတော်မူထားတဲ့ စွမ်းအားတွေကိုလည်း အသုံးမချဘူးဆိုရင်ဖြင့် ဖန်ဆင်းတော်မူထားတဲ့ ဘုရားကို စော်ကားရာ ကျပေရော့မပေါ့။ ကိုင်း သည်ကန်ထဲကငါးတွေ စိတ်ကြိုက်သာ ဖမ်းယူပေရော့လို့ ခွင့်ပြုတာတင် အားမရသေးဘဲ တစ်ခါတည်း ဖမ်းပေးလိုက်ပါလားလို့ တောင်းတာနဲ့ မတူပေဘူးလားဗျာ။ အပါယ်မလားချင်ရင် အနှီဟာတွေရှောင်၊ နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ရင် အနှီလိုကျင့်ရယ်လို့ နည်းလမ်းပေါင်းများစွာကို လေးဆယ့်ငါးဝါလုံးလုံး ညဉ့်သုံးယံမှာ တစ်ယံတည်းကျိန်းစက်တော်မူပြီး ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ လမ်းညွှန်ပြတော်မူခဲ့တာကို မလိုက်နာ မကျင့်ကြံဘဲ ဘုရားဆီကပ်ပြီး နားပူနားဆာတိုက်နေရုံနဲ့သာ လိုတိုင်းတလို့ ရရိုးဆိုရင်ဖြင့် လူတိုင်း နိဗ္ဗာန်ချည်း ရောက်ကုန်ကြပေမပေါ့။ သြော…ဦးဟန်ကြည်တို့ လူများ ကျလည်း ကျလောက်ပါပေရဲ့။ ဘုရားက အနှီလို ထပ်မတောင်းရအောင် လိုသမျှ ဖန်ဆင်းဖြည့်ဆည်းပေးတော်မူလိုက်တာကိုတောင်မှ မသိသားဆိုးဝါး၊ အသိခေါက်ခက် အ၀င်နက်လှချေရဲ့။
ကိုယ်တိုင်က ဘာမှ ကြိုးစားအားထုတ်မှုမရှိ၊ လိုက်နာကျင့်သုံးမှုမရှိ၊ လိုက်လျှောက်မှုမရှိဘဲ အလကားရတဲ့ လေတစ်ခုကို အရင်းပြုပြီး ထိုင်တောင်းတိုင်းသာ ပေးနေရရင်ဖြင့် ရှင်တော်ဘုရားများလည်း လူပျင်းအားပေးတွေ ဖြစ်တော်မမူကြပေဘူးလား။ အနှီလိုဆိုရင်တော့ နိဗ္ဗာန်တို့၊ ကောင်းကင်နိုင်ငံတို့၊ ဂျနတ် တို့မှာ လူပျင်းတွေချည်း စုနေမှာ သေချာပါ့။ ဦးဟန်ကြည်ကတော့ အနှီလို လူပြိန်းကြိုက် သုခဘုံမျိုးကို ယောင်လို့တောင် မသွားရေးချမသွား။ ပြောရရင်တော့ ဘယ်ဘာသာဝင်မှ ဘာသာဝင်ဖြစ်ရုံသက်သက်နဲ့ သုခဘုံလက်မှတ် ထုတ်ပေးတာ မရှိပေါင်ဗျာ။ ဘာသာတိုင်းမှာ သူ့လုပ်ရပ်နဲ့ သူ့လားရာဂတိဆိုတာ သတ်မှတ်ထားပြီးသား။ ကိုယ့်ဘာသာ အပျင်းထူပြီး ချမှတ်ထားတဲ့ လမ်းစဉ်ကို မလိုက်လျှောက်နိုင်ကြရင်တော့ ကိုယ့်ဘုရားကို လူမိုက်အားပေး မဖြစ်ရအောင် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ့်လုပ်ရပ်က ချမှတ်မယ့် ကိုယ့်လားရာအတိုင်း ဖြောင့်ဖြောင့်သားသားသွားလိုက်ကြတာပဲ ကိုယ့်ဘုရားကို ပူဇော်ရာရောက်မယ် ထင်ပါရဲ့။
လာပါဦးမယ်။ အလှူအတန်းကိစ္စ။ ဘာသာတိုင်းမှာ အလှူအတန်းဆိုတာ ရှိသပါ့ဗျာ။ လှူသော်ရ၏လို့လည်း ဘာသာဝင်တိုင်းက အသိအမှတ်ပြုပြီး လှူကြပါသဗျား။ လှူတာက ဖရောင်းတိုင် ငါးဆယ်ဖိုး သကောင့်သားများ ပြန်တောင်းတာက သိန်းကိုထောင်နဲ့ချီရော။ အောင်မယ် ရှိသေးတယ်။ ဘာတဲ့။ “ ဘယ်ဘက်က တစ်ဆုပ်ကြဲတိုင်း ညာဘက်က တစ်လှည်းဝင်ပါရစေဘုရား ”တဲ့။ ကောင်းပါလေ့။ ဦးဟန်ကြည် ဥာဏ်မီသလောက်ကတော့ လှူတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့အလိုလောဘကို ပယ်သတ်နိုင်ဖို့ လေ့ကျင့်ခိုင်းတာကိုး။ ကိုယ် တပင်တပန်း ချွေးနဲ့ရင်းပြီး ရှာဖွေထားတဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာကို နှမြောတွန့်တိုမှုမရှိဘဲ လှူရဲတယ် လှူဝံ့တယ်ဆိုကတည်းက အနှီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှုကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးရာ ရောက်တယ်မဟုတ်လား။ ရှိသမျှကိုတောင် အနှမြောမရှိဘဲ လှူတတ်တဲ့လူတစ်ယောက်အဖို့ စီးပွားပျက်သွားလည်း ဘယ်တုန်လှုပ်လိမ့်တုန်း။ ဦးဟန်ကြည် ဘုန်းကြီးကျောင်းသားဘ၀က နှုတ်တိုက်ကျက်ခဲ့တဲ့ သဂြိုဟ်ထဲကလို၊ ဆရာနန္ဒာသိန်းဇံရေးတဲ့ “ စိတ်အဆင့်ဆင့် မြင့်တက်ခြင်းသဘာဝ ”ဆိုတဲ့ စာတမ်းထဲကလို တဖြည်းဖြည်းချင်း မြင့်တက်လာတဲ့ စိတ်သဘာဝဟာ ကောင်းရာသုဂတိကို လမ်းပြမှာ ဧကန်။ ပြောရရင်တော့ ဘာသာရေးတိုင်းဟာ လူတွေရဲ့ စိတ်ရိုင်းတွေကို ချွန်းအုပ်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ လမ်းပြကြတာတွေချည်း။ ကိုင်း အနှီတော့ အထက်ကပုဂ္ဂိုလ်များလုပ်ကြတဲ့ အလှူမျိုးကတော့ ဘာသာရေးတိုင်းရဲ့ အခြေခံမူနဲ့ တက်တက်စင်အောင် လွဲနေပါရောလား။ လောဘကင်းအောင်၊ စိတ်ရိုင်းကို ချွန်းတင်နိုင်အောင် လှူခိုင်းပါတယ်ဆိုမှ အလှူပေးပြီး လောဘမီးအိုးကို လောင်စာထိုးနေမှဖြင့် လမ်းညွှန်တော်မူထားကြတဲ့ ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ ဘုရားပေါင်းများစွာကို ထိုင်ပြီး ဆဲတာကမှ အပြစ်နည်းဦးမယ် ထင်ပါရဲ့။
ဦးဟန်ကြည်လေးစားတဲ့ “ ဓမ္မပီယဆရာတော် ” ရဲ့ ဆောင်းပါးထဲက စာသားကို ကိုးကားရရင်တော့ “ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကိုယ်လူမျိုး၊ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွက်တော့ တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ အကုန်မခံဘဲ ကိုယ့်နောင်ဘ၀ ကောင်းစားရေးအတွက်ပဲ လှူတန်းနေတယ်ဆိုတာ အတ္တကြီးတာပဲ ” တဲ့။ သမ္မာကျမ်းချက်ထဲက စာသားကို ကိုးကားရရင်တော့ “ မြင်နေရတဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမအပေါ်မှာတောင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာမထားနိုင်တဲ့လူဟာ မမြင်ရတဲ့ ဘုရားသခင်ကို ချစ်တယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး ” ပါတဲ့ဗျား။ ကိုင်း စဉ်းစားသာကြည့်ကြပေရော့။ ဘာသာရေးအတွက်တော့ သိန်းပေါင်းထောင်ချီလှူပြီး လူနဲ့လူချင်းတော့ ကိုယ်ချင်းမစာနာ၊ ကိုယ့်အိမ်က အလုပ်သမားကိုတော့ လူနဲ့တန်းတူမထားတဲ့ ရွှေပြည်က ဘာသာရေးသမားများ ကြားတော်မူကြပါစ။ ဖတ်ဖူးတဲ့ သိုးဆောင်းအဆိုအမိန့်တစ်ခုထဲမှာတော့ စစ်မှန်တဲ့ စေတနာဆိုတာ ကိုယ့်ကိုဘာတစ်ခုမှ ပြန်ပြီးအကျိုးမပြုနိုင်တဲ့ လူတွေအပေါ်မှာ ထားတဲ့ စေတနာကို ခေါ်ပါသတဲ့။ ဘာသာတရားတွေကို အသာဘေးချိတ်။ စေတနာတောင် မှန်အောင်မထားနိုင်သေးဘဲများ တစ်ဘုရားတည်း ဘုရားနေတာ နားကို ကလောပါရော။ အနှီလို စိတ်မျိုးကြီး နှလုံးသားထဲမှာ သံမှိုစွဲပြီး ၀ိပဿနာတွေ၊ ပဋိစ္စသမုပ္ပတွေ ထိုင်လုပ်နေလို့ကတော့ဖြင့် နိဗ္ဗာန်နံ့ထွက်ဖို့ အသာထားဦး ငရဲနံ့တောင် မစင်ပေဘူး။ အနှာကြောင့်ပဲ ကျေးဇူးတော်ရှင် အမရပူရ မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာ ဘိဝံသက “ စိတ်ကောင်းရှိဖို့သည် ပထမ ” လို့ စည်းကမ်းချက် သတ်မှတ်တော်မူခဲ့တာကိုး။
ပြောလက်စနဲ့ ဆက်ပြောလိုက်ပါရစေဦးတော့။ ဦးဟန်ကြည် ခွတိုက်တယ်လို့ ဆဲချင်လည်း ဆဲကြပေရော့။ မျက်စိ စပါးမွေးစူး၊ နားကြားပြင်း ကတ်နေတဲ့ စကားလုံး။ ဘာတဲ့ “ သာသနာပြုတယ် ” တဲ့။ သူရို့ပြောတဲ့ သာသနာပြုတယ်ဆိုတာ ဘုရားတည်တာ ကျောင်းဆောက်တာကို ဆိုသကိုး။ သိဖူးဖတ်ဖူးသမျှတော့ ပဋိယတ်၊ ပဋိပတ်၊ ပဋိဝေဒ ဆိုတဲ့ သာသနာသုံးရပ်ရှိပါရဲ့။ အနှီ ဘုရားတည် ကျောင်းဆောက်ကြီးတော့ ဦးဟန်ကြည်ပဲ စာဖတ်နည်းလေရော့သလား၊ ဥာဏ်ပဲ နုံနဲ့လေရော့သလားတော့ မပြောတတ်ပေါင်။ ဘာသာသနာရယ်လို့ ဘယ်ဒင်းမှာမှကို ရှာလို့ မတွေ့တာကလား။ စေတီပေါင်း ရှစ်သောင်းလေးထောင်တည်ပြီး အနှီအလုပ်ကို အင်တိုက်အားတိုက် လုပ်ခဲ့တဲ့ သီရိဓမ္မာသောက မင်းကြီးကိုတောင် သာသနာပြုမင်းလို့ မခေါ်ဘဲ “ သာသနာ့ဒါယကာ ” လို့ ခေါ်တာ စဉ်းစားကြည့်ပေရော့။ ထေရ်ကြီးဝါကြီး ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကတော့ “ အနှီအလုပ်တွေဟာ သာသနာပမှာပဲ သာသနာပြုတယ်လို့ ခေါ်သကွဲ့။ သာသနာတွင်းမှာတော့ သာသနာ သုံးရပ်ပဲ ရှိတာကလား ” လို့ မိန့်တော်မူပါရဲ့။ ဦးဟန်ကြည်တို့ကလည်း ခက်ခက်ရချေသေးရဲ့။ လူတွေရဲ့ နှလုံးသားမှာ မေတ္တာတရားတွေ ပွားစည်းစည်ပင်လာအောင် လုပ်ဖို့၊ ပြောရရင် နှလုံးသားမှာ ကိုယ့်ဘုရားတွေ တည်ဖို့တော့ ခေါင်းထဲမထည့်ဘဲ ဟိုဘုရားတည်၊ သည်ဘုရားကျောင်းဆောက်ဖို့လောက်ပဲ အားသန်နေတာ များပါရဲ့။ နှလုံးသားမဖြူစင်၊ မေတ္တာတရားမရှိဘဲ ဘုရားချည်း ဖင်ထောင်ကန်တော့နေကြရင်တော့ ရေမချိုးဘဲ ရေမွှေးချည်း ထိုင်ဆွတ်နေတာနဲ့ မတူပေဘူးလား။ အောင်မယ် သည်ကြားထဲမှာ ဘုရားဖူးလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး တစ်နှစ်တစ်ခေါက်ကတော့ တစ်ချီတစ်မောင်း ထွက်ကြသေးတာရယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အိမ်တွင်းအောင်းနေရတာ ကြိုးညောင်းလာလို့ အပန်းဖြေခရီးထွက်ရင်လည်း ထွက်တယ်ပေါ့။ ရှက်စရာမှ မဟုတ်ဘဲ။ ဘယ်ဒင်းကြောင့် ဘုရားနာမည် ဆွဲဆွဲထည့်နေကြတယ် မပြောတတ်ပေါင်။ ဘုရားဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးတပ်လိုက်ရင် လုပ်သမျှ တင့်တယ်တယ်၊ ကုသိုလ်ရတယ်များ ထင်နေကြရော့သလားမသိ။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်ကျော် နွေရာသီတုန်းက ဦးဟန်ကြည် ပုဂံမှာ တစ်လနီးပါး သွားနေတာကို ဘုရားဖူးတယ်လို့ ခေါင်းစဉ်မတပ်ပေါင်။ ပုဂံဘုရားပေါင်းများစွာကို တစ်ဆူမှ မကျန်အောင် နေ့စဉ်နဲ့အမျှ သွားလေ့လာတာ ဘုရားကို ကြည်ညိုတာထက် ပုဂံခေတ် ဗိသုကာပညာတွေကို လေးစားစိတ်နဲ့ သွားလေ့လာတာကလား။ ဘုရားဆိုတာ ကိုယ့်နှလုံးသားထဲမှာ ရှိပြီးသား။ တကူးတက သွားဖူးစရာ လိုမှမလိုဘဲ။
ဦးဟန်ကြည်တို့ ရွှေပြည်သားများ ခက်ပုံက လိုက်နာရမယ့် ကျင့်ဝတ်ကို ပါးစပ်က တတွတ်တွတ်ရွတ်ရုံနဲ့တင် နိဗ္ဗာန်တံခါးကြီး ကောင်းကင်နိုင်ငံတံခါးကြီး ဂျိန်းခနဲပွင့်ရော ထင်နေကြတာကလား။ ကျန်တာ အပထား။ ရှင်တော်ဘုရား ဟောတော်မူတဲ့ မင်္ဂလသုတ်ကိုပဲ နမူနာကြည့်ကြစို့။ အများစုက အနှီမင်္ဂလသုတ်ကြီးကို ရွတ်ရုံ၊ မင်္ဂလသုတ် ပရိတ်တော်ကို ဒီဗီဒီတစ်ချပ်ထိုးထည့်ပြီး ဖွင့်လိုက်ရုံနဲ့တင် ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ယာ ကိုယ်ပါမကျန် မင်္ဂလာရှိရော ထင်ကြတာများ အံ့သြပါရဲ့။ ကိုင်း…ဦးစိုးဝင်း ( စေတီယင်္ဂ ဓမ္မာစရိယ ) အနက်ပြန်ထားတဲ့ မင်္ဂလသုတ် ပရိတ်တော်ထဲက တစ်ပိုဒ်လောက်ကို နမူနာ နာကြည့်ကြစို့လား..
အာရတီ ၀ိရတီ ပါပါ
မဇ္ဇပါနာ စ သံယမော
အပ္ပမာဒေါ စ ဓမ္မေသု
( မကောင်းမှုမှ စိတ်ဖြင့် ဝေးစွာ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ မကောင်းမှုမှ ကိုယ်နှုတ်တို့ဖြင့် အထူးရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ သေရည်သေရက်သောက်ခြင်းမှ ကောင်းစွာရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၌ မမေ့မလျော့ခြင်း၊ ဤတရားလေးပါးသည် မြတ်သောမင်္ဂလာမည်၏ဟူ၍ မှတ်လေလော့ )
အနှာနဲ့မှ အားမရသေးရင်လည်း ဒဂုန်ဦးထွန်းမြင့်ရဲ့ သုံးဆယ့်ရှစ်ဖြာ မင်္ဂလာတရားတော် ကဗျာလေးတွေကို နွေရာသီဗုဒ္ဓဘာသာ အခြေခံသင်တန်းတက်ကြမယ့် ကလေးတစ်ယောက်ဆီက အသာဆွဲယူပြီး ဖတ်ကြည့်ပေရော့။ ရှင်တော်ဘုရားက အနှာတွေကို လိုက်နာရင် မင်္ဂလာရှိမယ်လို့ ဟောထားတာကို လိုက်နာဖို့မကြံဘဲ ထိုင်ရွတ်နေရုံနဲ့ ရှိလိုက်ဦးမယ့် မင်္ဂလာတွေ။ ထားစရာတောင် နေရာမရှိပေဘူး။ ဥပမာပေးရရင် ကြက်ဥကြော်နည်းကို စာနဲ့ရေးပေးထားတာကို လိုက်မလုပ်ဘဲ ရေးပေးထားတဲ့ စာသားကို ထိုင်ရွတ်နေတာနဲ့တောင် တူသေးရဲ့။ ကြက်ဥကြော်တော့ ဝေလာဝေး ပါးစပ်ညောင်းတာတောင် အဖတ်တင်ဦးမှာကလား။ သမ္မာကျမ်းစာလည်း ထိုနည်းနှင်နှင်ပ။ လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့် ကျင့်ဝတ်တွေကို စာနဲ့ရေးပြထားတယ်ဆိုကာမှ ရွတ်ပြီးဆုတောင်းနေတာကတော့ လိုရင်းကို ရောက်မယ်မထင်။
စာတွေရ၊ စာတွေရွတ်နေတိုင်းသာ နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်ဖြင့် နိဗ္ဗာန်ကို ကျန်တဲ့ရဟန်းတွေထက် အရင်ရောက်သင့်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ညီတော်အာနန္ဒာထေရ်ထက် ဘယ်သူရှိလိမ့်တုန်း။ အာနန္ဒာမထေရ်ဟာ ဥာဏ်အရာမှာ ဧတဒဂ်ရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ အပြင် ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ အပါးတော်မြဲလည်း ဖြစ်ပြန်တော့ ဘုရားရှင်ရဲ့ နှုတ်ထွက်တရားတော်ဟူသမျှ သူအကုန်ရတာချည်း။ ညီတော်အာနန္ဒာရဲ့ ဘုရားကို ချစ်ပုံကလည်း ပြိုင်စံရှား။ ရှင်တော်ဘုရားကို အရိပ်လို ထပ်ချပ်မကွာ စောင့်ရှောက်တော်မူတာကလား။ သို့ပေမင့် ဘုရားရှင် မရှိတော့တဲ့နောက်မှာ တရားတော်တွေကို ပထမသင်္ဂါယနာတင်ဖို့ အချိန်ကျလာတဲ့အချိန်မှာ သက်တော်ကြီးရင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ အာနန္ဒာမထေရ်ကြီးခမျာ သောတ္တာပတ္တိဖိုလ်ကနေတောင် မတက်ရှာသေးဘူးကိုး။ ကိုယ်တိုင် ကျင့်ကြံအားထုတ်တော်မူမှပဲ သင်္ဂါယနာတင်ပွဲအမီ အရဟတ္တဖိုလ်ကို ဆိုက်ရောက်တော်မူရှာပါရဲ့။ အနှီတော့ ဦးဟန်ကြည်တို့ ရွှေပြည်သားတွေ ကိုယ်တိုင် လိုက်လျှောက်မှုမရှိဘဲ ရွတ်ရုံဖတ်ရုံနဲ့တင် တင်းတိမ်နေကြတာ ဦးဟန်ကြည် အံ့သြလွန်းလို့ ပင့်သက်တောင် ရှူမိပါရဲ့။ ပြောရရင်တော့ ဦးဟန်ကြည်တို့တတွေဟာ နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ထက် ကြားကာလလေးမှာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရရေးကိုပဲ ရှေ့တန်းတင်ကြတာကလား။ ရှင်တော်ဘုရားရဲ့ နှုတ်ထွက်ပါဠိတွေကို တတွတ်တွတ်ရွတ်သလို ရှင်တော်ဘုရားရဲ့ စရိယသုံးပါး၊ လေးသင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်း ကာလကြာအောင် ဖြည့်ကျင့်တော်မူခဲ့တဲ့ ပါရမီသုံးဆယ်၊ စွန့်ခြင်းငါးရပ်၊ သတ္တ၀ါအများအပေါ် ထားတော်မူတဲ့ မေတ္တာတွေကို အောက်မေ့ဆင်ခြင်ခြင်းဟာလည်း ဗုဒ္ဓာနုဿတိ ကမဋ္ဌာန်းကို စီးဖြန်းရာရောက်တာမို့ လောကီသားများ ငမ်းငမ်းတက် လိုချင်နေတဲ့ ကုသိုလ်ရပါကြောင်းလေးလည်း ဦးဟန်ကြည်က ခပ်ရွတ်ရွတ်ကလေး ပြောလိုက်ချင်တော့တာပါပဲ။
သည်ကြားထဲမှာ ဦးဟန်ကြည်တို့လူမျိုးက ပါးစပ်က ဘုရားဘုရား၊ လက်က ကားယားကားယား လုပ်တဲ့လူတွေက တစ်ရာမှာ ကိုးဆယ့်ကိုးယောက်။ အနှာတောင် ကျန်တဲ့ကိုးယောက်က လက်ပြတ်နေလို့ မကားယားနိုင်တာကလား။ လက်မကားယားနိုင်ရင်တောင် ခြေကတော့ ကားယားဦးမှာ သေချာသပါ့။ ပြောတော့သာ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ အိမ်ခန်းထောင့်ကြည့်လိုက်ရင် နတ်အုန်းသီးလေးတွဲလောင်း၊ ရှံနီစလေး တန်းလန်းနဲ့။ တစ်ခါတစ်ခါ သိန်းလေးငါးဆယ် အကုန်ခံပြီး ဟိုမရောက်၊ သည်မရောက် အီကြာကွေးနတ်ကတော်တွေကို ပူဇော်ပသတဲ့ပွဲကြီးတွေ ၀ှဲချီးကျင်းပလိုက်ချေသေး။ ပါးစပ်ကရွတ်လိုက်ရင် “ သုရာမေရာယ မစ္ဆပမာဒဌာနာ ဝေရမဏိ ” စာနဲ့ရေးလိုက်ရင် “ သေရည် ” လို့ ပက်ပက်စက်စက် နာမည်ဆိုးတပ်ပေမယ့် အမောင်နတ်များကိုတော့ ဘီအီးတို့ တောအရက်တို့ မဟုတ်ဘဲ ဂျော်နီလမ်းလျှောက်တောင်မှ red label နဲ့ အားမရဘဲ တတ်နိုင်ရင် blue label, gold label လိုက်ကြသေးတာကလား။ အနှီနတ်တွေအကြောင်း စိတ်ဝင်တစားရှိလွန်းလို့ မင်းတုန်းမင်းလက်ထက်ကတည်းက မြန်မာပြည်ကိုလာပြီး သုံးဆယ့်ခုနစ်မင်းအကြောင်း စုံစမ်းသုတေသနလုပ်သွားတဲ့ အနောက်တိုင်းသုတေသီတစ်ယောက်ရဲ့ စာတမ်းကို ကျကျနနဖတ်တော့မှပဲ သူရို့နတ်တွေက တစ်နတ်မှကို မကောင်းပဲကိုး။ အရက်သမား၊ ကြက်သမား၊ ကြာကူလီ၊ ဥပစ္ဆေဒကကံနဲ့ သေခဲ့တဲ့လူတွေက ခပ်များများ၊ သည်ကြားထဲမှာ ကုဋ္ဌနူနာနဲ့ သေတဲ့လူတောင် ပါလိုက်ချေသေး။ သြော…ဦးဟန်ကြည်တို့ ရွှေပြည်သားများ တစ်ခုကိုးကွယ်ရတာ အားမရရှာကြပဲကိုး။ အလောင်းစည်သူမင်းကြီးက အနှီနတ်တွေကို မြင်ပြင်းကတ်လွန်းလို့ နတ်ရုပ်တွေအကုန် ရွှေစည်းခုံဘုရားထဲမှာ ပစ်ထားလိုက်တာတောင် ဘုရားသွားသယောင်နဲ့ နတ်ကိုးပြီး ပြန်လာကြသေးတာကလား။ တစ်ချို့စေတီတော်များ ခြေရင်းမှာ၊ တစ်ချို့နေရာမှာ ဘုရားနဲ့ တစ်တန်းတည်းမှာ ဘိုးတော်တွေရော၊ ဘာပိုင် ညာပိုင်ကြီးတွေရော ရုပ်တုတွေမှ အခန့်သား။ အောင်မယ်မင်း သကောင့်သားများက ဘုရားထက်တောင် ပါဝါကြီးတော်မူချက်။
ဦးဟန်ကြည်တို့ပြောလေ့ရှိပါရဲ့။ သရဏဂုံပျက်တယ်ဆိုတဲ့ စကား။ ကျန်တဲ့ဘာသာမှာလည်း ဘာသာပျက်တယ်ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်း။ ဘာလုပ်ရင် သရဏဂုံပျက်တယ် ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်ဆိုတာမှ မကြားချင့်အဆုံး။ ဦးဟန်ကြည် သိသလောက်ကတော့ ဗုဒ္ဓံ ( မြတ်စွာဘုရားကို ) သရဏံ ( ကိုးကွယ်ရာဟု ) ဂစ္ဆာမိ ( ဆည်းကပ်ပါ၏ ) လို့ အနက်ပြန်တာကလား။ ခပ်ငယ်ငယ်ကတော့ သရဏံဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ပါးစပ်ပိတ်ပြီး ပီပီသသမရွတ်နိုင်ရင် သရဏဂုံမတည်ဘူးလို့လည်း မှတ်ဖူးပါရဲ့။ သို့ပေမင့် တစ်ချို့တိုင်းပြည်တွေမှာ “ ဂချာမိ ” လို့ သူရို့လူမျိုး လေယူလေသိမ်းနဲ့ ရွတ်နေကြတာကြားတော့ ဟယ် ငါ့ဟာက သောက်တလွဲချည်း ထင်ပါရဲ့လို့တော့ တွေးမိသား။ သူ့ဆိုလိုရင်းက ဘုရားမှတစ်ပါး ကျန်တဲ့အရာကို အားကိုးရင်၊ ကိုးကွယ်ပူဇော်ရင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်က လျှောကျတယ်လို့ ဆိုလိုတာကိုး။ အနှီလို ဆိုတော့ နတ်မှနတ် တစ်နတ်တည်းနတ်နေတဲ့ ဦးဟန်ကြည်တို့ ရွှေပြည်သားများကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရယ်လို့ ခေါ်ရမှာတောင် ခပ်ရွံ့ရွံ့။ သည်ကြားထဲမှာ ထစ်ခနဲရှိရင် ဗေဒင်ကလေးက မေးလိုက်ချင်သေးတာ။ ယတြာလေးက ချေလိုက်ချင်သေးတာ။ Sky net ကလွှင့်နေတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုမှာတောင်မှ ဗေဒင်ပါသေး။ အနှီိလိုသာ မကောင်းတာလုပ်ပြီး မကောင်းတာဖြစ်မယ့်အရေးကို ယတြာနဲ့ ပျောက်စတမ်းဆိုရင် ရှင်တော်ဘုရားက ကံကံ၏အကျိုးတို့ ဓမ္မောဟဝေ ရက္ခတိ ဓမ္မစာရီတို့ကို လေကုန်ခံပြီး ဘယ်ဟောတော်မူမလဲ။ ကိုင်း လုပ်ချင်ရာလုပ် ယကြာသာ ချေလိုက်ကြလို့ ဟောတော်မူပေမပေါ့။ အနှီလိုသာဆို မြေမြိုသွားတဲ့ ဘုရားရဲ့ ယောက္ခမ သုပ္ပဗုဒ္ဓမင်းကြီးတို့ ယောက်ဖတော် ဒေ၀ဒတ်တို့ကိုလည်း အင်တိုက်အားတိုက် ယတြာမချေကြပေဘူးလား။ ရှင်တော်ဘုရားရဲ့ လမ်းစဉ်နဲ့ ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီးဆန့်ကျင်နေတဲ့ ယတြာမှ ယတြာလုပ်နေတဲ့ ရွှေပြည်သားများကိုလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာစာရင်းသွင်းရမှာ ဦးဟန်ကြည် ကြောက်ပါရဲ့။
အနှာတင်ဘယ်ကလိမ့်တုန်းဗျာ။ အခုတလောမှာ “ အစွန်းရောက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကလည်း မမြင်ချင့်အဆုံး။ ဘယ့်နှာ ရှင်တော်ဘုရားရဲ့ တရားတော်က မဇ္ဇျိမပဋိပဒ္ဓါ “ အလယ်အလတ်လမ်းစဉ် ” မဟုတ်လား။ အလယ်မှာနေပါလို့ ရှင်တော်ဘုရားက မိန့်ကြားတော်မူတဲ့စကားကိုမှ နားမထောင်ဘဲ အစွန်းမှာ သွားနေလို့ကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဘယ်ဟုတ်လိမ့်တုန်း။ သူရို့အသုံးအနှုန်းကြီး ကြားရုံနဲ့တင် ဦးဟန်ကြည် ကြောစိမ့်ပါ့။
ဦးဟန်ကြည်တို့တတွေရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း လိုက်နာရမယ့် အခြေခံမူငါးချက်ဖြစ်တဲ့ ငါးပါးသီလမှာ အဒိန္နာဒါနာ “ သူတပါးရဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာကို ခိုးယူခြင်း ” ကို ရှောင်ကြဉ်ရမယ်ဆိုတဲ့ သိက္ခာပုဒ်တစ်ခု ပါပါ့ဗျာ။ ငါးပါးသီလကို ခါးဝတ်ပုဆိုးကဲ့သို့ မြဲမြံခြင်းသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကောင်းတို့ရဲ့ အမူအကျင့်လို့လည်း အမြတ်တနိုး သတ်မှတ်ကြပါရဲ့။ ကိုင်း ကျန်တဲ့အပါးလေးတွေ ဘေးချိတ်။ အဒိန္နာဒါနာကိုပဲ ဆန်းစစ်ကြည့်ကြဦးစို့ရဲ့။ ဦးဟန်ကြည်တို့ရဲ့ လူမျိုးက လမ်းကြိုလမ်းကြားဝင်ပြီး သူများထဘီရုပ်တဲ့လူတန်းစားကိုပဲ သူခိုးလို့ သတ်မှတ်ချင်ကြတယ် ထင်ပါရဲ့။ ပန်ကာအောက်ထိုင်ပြီး တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာကို သိန်းထောင်ချီဘုန်းတဲ့ သကောင့်သားများကျတော့ ဘယ်သူခိုးဟုတ်လိမ့်တုန်း။ အောင်မယ် “ အလွဲသုံးစားမှု ” တဲ့။ လုပ်ပုံက။ ဦးဟန်ကြည် ဥာဏ်မီသလောက်ကတော့ …
“ ယူသင့်တာထက် ပိုယူလိုက်တာဟာ ခိုးတာ . . .
ပေးသင့်တာထက် လျှော့ပေးတာဟာ ဓားပြတိုက်တာ ”
စဉ်းစားကြစို့။ ဈေးသည်တစ်ယောက်ဟာ ယူသင့်တဲ့အမြတ်အစွန်းထက် ၁၀၀ ပိုပြီး ယူလိုက်ရင် ဒါဟာ ၁၀၀ ခိုးတာမဟုတ်လို့ ဘာလို့ခေါ်ရပါလိမ့်။ ပိုက်ဆံ ၁၀၀ ယူပြီး ၁၀၀ ဖိုးအပြည့် ၀န်ဆောင်မှုမပေးဘဲ ၅၀ ဖိုးပဲ ၀န်ဆောင်မှုပေးတာကရော ၅၀ ခိုးလိုက်တာ မဟုတ်လို့ ဘာပါလိမ့်။ တရားဝင် ကုန်စည်ခွန်မဆောင်ဘဲ ဆိုင်ရာပိုင်ရာနဲ့ အပီကပ်ပြီး အခွန်မပေးရအောင်လုပ်တာဟာ တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာကို ခိုးတာလို့ မခေါ်ရဘူးလား။ ၁၀၀ တန်ပစ္စည်းလာရောင်းတာကို “ ဟာ သည်ကောင်တော့ ဗိုက်နာနေပြီ…ငါပေးသလောက် ယူရမှာပဲ ” ဆိုတဲ့ လူယုတ်မာစိတ်မွေးပြီး ၅၀ ပဲပေးလိုက်တာဟာ တစ်ဖက်သားရဲ့ပိုက်ဆံ ၅၀ ကို ဓားပြတိုက်လိုက်တာပဲ မဟုတ်လား။ အောင်မယ်မင်း လုံလိုက်တဲ့ ငါးပါးသီလ။ စိတ်လိုက်ပါတဲ့ သီလရေစစ်။ ဆင်တောင်အပေါက်ကျွံကျမယ့်ကိန်း။
သည်ကြားထဲမှာ ကာမေသုကလေးက စွက်လိုက်ချင်းသေးတာကလား။ အနှီလိုပြောတော့ “ ဆရာရယ် အနှီတစ်ခုတော့ သားတို့က လုံပါ့ ” လို့များ မိုးကြိုးပစ်တာကို ထန်းလက်နဲ့ ကာမယ် မကြံလေနဲ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ၀န်းကျင်က ဓမ္မဗျူဟာ စာစောင်မှာ ထီးချိုင့်မြို့တည်တောဆရာတော်ဘုရားကြီးကို မေးလျှောက်ထားတဲ့ ကာမေသု မေးခွန်းတစ်ခုကို မှတ်မိသလောက် ကိုးကားရရင် လူနှစ်ယောက် လက်မထပ်ဘဲ အတူနေရင် အနှီမိန်းကလေးရဲ့ ကာမကို သူ့မိဘက ပိုင်တာဖြစ်လို့ အမောင်သကောင့်သား ကာမေသုကံ ထိုက်ပါသတဲ့ဗျား။ I love you တစ်လုံး လက်စွဲသုံးပြီး ခြင်ထောင်ဇာတ်ချည်း စွတ်ခင်းနေတဲ့ ကိုကိုတို့ သတိသာထားကြပေရော့။ မမများကလည်း များတို့နဲ့ အနှီဟာနဲ့ မဆိုင်လို့များ ညာတာပါတေးနဲ့ ရှောင်မပြေးလေနဲ့။ အိမ်ထောင်သည် ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ ဖောက်ပြားမိရင် မယ်မင်းကြီးမတို့ရော ဘယ်ပြေးလို့ လွတ်လိမ့်တုန်း။
ဦးဟန်ကြည် သည်ရက်ပတ်အတွင်း မကြာမကြာစဉ်းစားမိပါရဲ့။ ငါရို့တွေ ရေလိုက်လွဲနေတယ်ထင်ပါရဲ့လို့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဦးဟန်ကြည်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းက ဘုရားရှေ့ရောက်တိုင်း သြကာသ ကန်တော့ချိုးနဲ့ ကန်တော့လေ့ရှိကြတာကိုး။ တကယ်တော့ အနှီသြကာသဆိုတာက ဆုတောင်းစာပေါ့လေ။ အနှီဆုတောင်းထဲမှာ “ ကပ်ကြီးသုံးပါး ” ကင်းပါရစေဆိုတဲ့ ဆုတောင်းလဲ ပြူးပြဲနေအောင် ပါပါရဲ့။ ကပ်ကြီးသုံးပါးဆိုတာကို အလျဉ်းသင့်တုန်း အနက်ဖွင့်ပြရရင်တော့
“ ရောဂန္ဓရကပ် - ရောဂါဆိုးတွေကျရောက်ပြီး လူအများ သေကျေခြင်း
ဒုဗ္ဘိခန္ဓရကပ် - အစာရေစာ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးပြီး လူအများ သေကျေခြင်း
သတ္ထန္ဓရကပ် - လူအချင်းချင်း လက်နက်ဖြင့် သတ်ဖြတ်ခြင်းကြောင့် လူအများ သေဆုံးခြင်း ”
ဦးဟန်ကြည်တို့တတွေ ကပ်ကြီးသုံးပါး ကင်းလွတ်ဖို့ ကိုယ့်ဘုရားဆီမှာ တဖွဖွတောင်းဆိုပြီး ကိုယ်တိုင်ကတော့
ကပ်ကြီးတွေ မဆိုက်ဆိုက်အောင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ လုပ်နေကြတာဟာ တပည့်တော်တို့ အရှင်ဘုရားဆီမှာ တောင်းနေပေမယ့် တကယ်လိုချင်လို့တောင်းတာ မဟုတ်ပါဘူးလို့များ သက်သေပြရာ ရောက်မလားလို့ တွေးမိတာကိုး။ အင်း အားမနာတမ်း ပြောရရင်တော့ ဦးဟန်ကြည်တို့ ရွှေပြည်သားတွေဟာ လူမျိုးတို့ ဘာသာတို့ကို သာမန်အချိန်တွေမှာ စောင့်ရှောက်ဖို့ စည်ပင်ပွားများအောင် ကြိုးစားပံ့ပိုးကြဖို့ ယောင်လို့တောင် စိတ်မကူးဘဲ ရန်ဖြစ်တဲ့အခါမှပဲ လူစုရတာလွယ်အောင် ပါးစပ်ကနေ တဖွဖွ ပြောကြတယ်ထင်ပါရဲ့။ ဦးဟန်ကြည်ကတော့ ကမ္ဘာ့လူသားတွေ ငြိမ်းချမ်းကြစေဖို့ စေတနာကောင်းနဲ့ ဘာသာတရားတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်တော်မူခဲ့ကြတဲ့ ဘာသာတိုင်းရဲ့ အထွဋ်အမြတ် ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကို ကြားထဲကနေ အားနာမိတာလည်း အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ။ သူရို့တွေ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ချမှတ်ထားတဲ့ လမ်းစဉ်တွေကို ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ လိုက်နာကြသူချင်း မငြိမ်းနိုင် မချမ်းနိုင် သတ်ဖြတ်နေကြတာတွေကို ကမ္ဘာ့သတင်း မြန်မာ့သတင်းတွေမှာ မြင်ရကြားရတိုင်း သက်ဆိုင်ရာ ဘုရားတွေကို ဘယ်လိုတောင်းပန်ရပါ့လို့လည်း အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ စဉ်းစားမိပါရဲ့။
ကိုင်း…အထက်ကနေ ဖတ်လာလိုက်တာ သည်အထိရောက်လာပြီဆိုရင်ဖြင့် ငါဟာ ငါ့ဘာသာဝင် စစ်စစ် ဖြစ်ပြီလားလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးကြစို့ရဲ့။ ငါဟာ ဘုရားကိုစော်ကားတဲ့ blasphemy များဖြစ်ပြီလားလို့လဲ အားမနာတမ်း မေးကြဦးစို့။ ဦးဟန်ကြည်ကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အန္ဓဗုဒ္ဓဘာသာ ( ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူညံ့ ) များဖြစ်နေပြီလားလို့ မကြာမကြာ မေးစမ်းကြည့်မိပါရဲ့။ မရှက်တန်းဝန်ခံရရင်တော့ သမ္ပဖလာပ၀ါစာ ဆိုတဲ့ သေးနုပ်သိမ်ဖျင်းတဲ့ အတင်းစကားတွေ ပြောမိပြောထမရှိပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ ဒေါသအလျှောက် ခပ်မာမာခပ်ကြမ်းကြမ်း ဖရုဿဝါစာတွေ သုံးမိတတ်တဲ့၊ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဆိုတဲ့ စာရိတ္တသီလကိုပဲ ဖြည့်ကျင့်ဖို့ အားသန်ပြီး ဖြည့်ဆည်းခြင်း ၀ါရိတ္တသီလကို အချိန်တော်တော်များမေ့လျော့နေတတ်တဲ့၊ အခါအားလျော်စွာ ဘီယာလေး၊ ၀ီစကီကလေး နှိပ်လေ့ရှိတဲ့၊ ကိုယ့်ကူညီမှုကို တစ်ဖက်သားက အသိအမှတ်မပြုရင် ဒေါကန်တတ်တာမို့ စေတနာကိုတောင် ဖြူစင်အောင် မထားနိုင်သေးတဲ့၊ သူတော်ကောင်းဥစ္စာ ခုနစ်ပါးမှာ အပါးတော်တော်များများ ကွက်လပ်ဖြစ်နေတဲ့ ဦးဟန်ကြည်ခမျာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လူကောင်း၊ သူကောင်းစာရင်းထဲတောင် ထည့်ဖို့ မရဲပေါင်ဗျာ။ သို့ပေမင့် ဘာသာတရားတိုင်းရဲ့ အခြေခံမူဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတရားကိုတော့ ဦးဟန်ကြည် ရှင်သန်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ဘ၀တလျှောက်လုံး ဖြည့်ကျင့်ခဲ့တာမို့ သတ္တ၀ါအများကို မစာနာ မသနားတဲ့ လူယုတ်မာ စာရင်းမ၀င်သေးတာကိုပဲ ဂုဏ်ယူနေရပါသေးရဲ့။
ပြောခဲ့သမျှကို အနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်တော့ ဘာသာဝင်စစ်စစ်ဖြစ်ခြင်း မဖြစ်ခြင်းဟာ ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ ဘာသာတရားတွေရဲ့ အဆုံးအမတွေကို အပြည့်အ၀ လေးစားလိုက်နာမှု ရှိခြင်းမရှိခြင်းအပေါ်မှာမူတည်ပြီး သတ္တ၀ါအများ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှေးရှုကြတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က ဘာသာတရားတိုင်းရဲ့ အခြေခံမူဖြစ်တဲ့ “ ကိုယ်ချင်းစာတရား ” ကိုသာ ဘာသာဝင်တိုင်း လက်ကိုင်ထားကြရင်ပဲ ကိုယ့်ဘာသာအသီးသီးရဲ့ အန္တိမပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့ ထာဝရအေးငြိမ်းချမ်းသာခြင်းကို မရမီစပ်ကြားမှာ မတူကွဲပြားမှုတွေများစွာကြားမှာ ရှင်သန်နေရတဲ့ အသက်တာအတွင်း လုံခြုံချမ်းမြေ့ခြင်းနှင့် စိတ်အေးချမ်းသာခြင်းတွေကို ရကြမှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲတဲ့အကြောင်းကို ဒီနေ့လူသားတွေ ယုံကြည်ကိုးကွယ်နေကြတဲ့ ဘာသာရေးတိုင်းရဲ့ အထွဋ်အမြတ် မဟာကရုဏာတော်ရှင်တွေကို ကြည်ညိုလေးစားစွာနဲ့ ဦးဟန်ကြည် ရဲရဲကြီး အာမခံလိုက်ပါကြောင်းဗျား။ ။
အနှီပို့စ်ကို တစ်လမ်းကျော်က နတ်ကန္နားပွဲမှာ ၀ါကာ ၀ါကာ သီချင်းကို မိုင်ကုန်တင်ဖွင့်ထားတာကို မကြားချင်ယောင်ဆောင်၊ အမဲခြောက်ဖုတ်အက တွန့်လိန်ကောက်ကွေးနေအောင်ကနေတဲ့ မာမီခြောက်ကို စိတ်ကူးထဲမှာ ပုံဖော်ပြီး ဖင်ပိတ်မကန်မိအောင် ဒေါသစိတ်ကို ချွန်းအလီလီအုပ်ပြီး ခန္တီပါရမီကို မနိုင့်တနိုင် ဖြည့်ကျင့်ရင်း အင်တိုက်အားလိုက် ရေးထုတ်လိုက်ရပါကြောင်း . . .
Posted by Han Kyi at 12:03:00 pm 11 comments:
အမျိုးအစား : မြင်သောနား၊ ကြားသောမျက်စိ, အတွေးအမြင်
အချစ်နဲ့ ဟင်းချိုဟာ ပူနေတုန်းပဲ အရသာရှိသတဲ့ . . .
အဘယ်သို့သော ပညာရှိသူတော်ကောင်းက မြွက်ကြားထားခဲ့တဲ့ အဆိုအမိန့်မှန်းတော့ မသိပေါင်ဗျာ။ သို့ပေမင့် စာတစ်တန်ပေတစ်ဖွဲ့နဲ့ မှတ်တမ်းတင်ကျန်ရစ်နေတယ်ဆိုကတည်းက ဦးဟန်ကြည် သာမညောင်ညထက်တော့ ပိုပြီးစွမ်းမှန်း သေချာပြီးသားမို့ ဆရာတင်ပြီး မှတ်ထားလိုက်တာ ခေါင်းထဲမှာလည်း အဆိုအမိန့်ပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်နဲ့ ဗလပွတ်လည်ပြီး ဗလချာကို ရမ်းနေပါရောလား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မရှိတာထက် ရှိတာပိုကောင်းတာမို့ အခုလို အလျဉ်းသင့်တဲ့အချိန်မျိုးကျတော့ အလိုက်သင့် ထုတ်သုံးလိုက်ရုံပ။ အနှီအဆိုအမိန့် မှန်မမှန်ကိုတော့ သည်နေ့ပဲ ပူပူနွေးနွေး အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တဲ့ ချဉ်ပေါင်သူဌေး ကိုဘကြိုင်ကို မေးကြည့်ရင် ပိုပြီးအဆင်ပြေမယ်ထင်ရဲ့။ မေးရင်လည်း လူမသိသူမသိ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ကြိတ်မေးမှ။ သည်လူကြီးက ကြီးကောင်ကြီးမှ ၀က်သက်ပေါက်ထားတာဆိုပြန်တော့ အနှာမျိုးဆို ဇွတ်ရောအတင်းပါ မဏ္ဍပ်တိုင်တက်ပြနေမှာ သေချာသကိုး။ ရိုးရိုးတန်းတန်းမဖြေဘဲ ကြော်ငြာမင်းသားစတိုင်ဖမ်းပြီး “ ပူပူလေးနဲ့ ကောင်းသဗျ . . . ပူပူလေးနဲ့ ကောင်းသဗျ ” လို့ချည်း စွတ်အော်နေမှ ခက်ခက်ရချေသေး။ ( ယိုသူမရှက် မြင်သူရှက်ဗျနော ကိုချဉ်ပေါင်ခြံကြီး ဟဲ ဟဲ . . .း)
ဦးဟန်ကြည်တို့ ကိုဘကြိုင်ကြီးက ဘလော့ပေါ်မှာတော့ လူချစ်လူခင် အတော်များတာကလား။
မများနေရိုးလား။ လူပြိုကြီး…လူပြိုကြီးနဲ့ လိုင်စင်ရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုး။ သည်ကြားထဲမှာ ခရီးကလည်း ဘာသွားသလဲမမေးနဲ့။ အခုသည်နားမှာ ရှိပေမယ့် ခဏကြာရင် ဟိုနားရောက်ချင် ရောက်နေတတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး။ ခပ်ငယ်ငယ်က ကျောင်းစာမှာ သင်ခဲ့ရတဲ့ ဆိုရိုးအတိုင်း “ တစ်ရွာတစ်ကျီဆောက် ” ရရင်တော့ တစ်ပြည်လုံး ချဉ်ပေါင်ခင်းတွေတောင် ဖုံးရချေရဲ့။ မှတ်မှတ်ရရ ချဉ်ပေါင်ခြံကြီး ရွှေမန်းမြို့ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် သံယောဇဉ်လွန်းတင်တဲ့ကြိုးတွေဘာတွေ ဖွဲ့မယ်ကြံဟန်တူပါရဲ့။ ပို့စ်တစ်ပုဒ်တောင် မစားရညှော်ခံတင်လိုက်ချေသေးတာကလား။ ဦးဟန်ကြည်တို့ကလည်း အိုဂိုဏ်းဝင်တစ်ယောက် အူလည်လည်နဲ့ တိုးကာမှတိုးရောဆိုတဲ့သဘောနဲ့ အဆင်းမှာ ဘီးဝိုင်းတပ်ပြီး ချောဆီဝိုင်းထိုးပေးလိုက်တာတောင် အနှီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက တုတ်တုတ်မှ ရွေ့တော်မမူတော့ စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ နေဟဲ့ဆိုပြီး အချွန်နဲ့မမဘဲ ပစ်ထားလိုက်တာ ကြာပါပေါ့လား။
ချဉ်ပေါင်ခြံကြီးနဲ့ မဒမ်ချဉ်ပေါင်ခြံ အသစ်စက်စက် . . .
အောင်မယ်…လူမစွမ်း နတ်မဆိုတာ တယ်မှန်တာကလား။ ချဉ်ပေါင်ခြံကြီး စွံမယ့်စွံတော့လည်း ဗြုန်းစားဗြင်းစားကြီးဗျား။ ချဉ်ပေါင်ခြံကြီးကို မ-လိုက်တဲ့ နတ်ကတော့ အတော့်ကို စွမ်းဟန်တူရဲ့။ သတင်းသဲ့သဲ့ကြားရတာတော့ ဘိလပ်က သူကြီးမင်း ကိုကိုမောင်နဲ့ မလေးက မင်းဧရာတို့ အနှီနတ်ကြီးဆီသွားပြီး အပူကပ်ဖို့ တိုးတိုးတစ်မျိုး ကျယ်ကျယ်တစ်ဖုံ တိုင်ပင်နေကြတယ်ဆိုကိုး။ ဘုန်းဘုန်းတောက် မလေးရောက်နေတုန်းမှာ မင်းဧရာတစ်ယောက် ဘုန်းဘုန်းတောက်ကိုပဲ သွားဖူးသယောင်ယောင်နဲ့ နတ်ကြီးသတင်းကို အချိန်ရတိုင်း ဇွတ်အတင်းစုံစမ်းလွန်းလို့ ဘုန်းဘုန်းတောက်ခမျာ ဗီဇာမကုန်ခင် ကုလားပြည် ပြန်ကြွပြေးပါရောလား။ အနှီမှာပဲ သူကြီးမင်းကိုကိုမောင်လည်း အံမယ် ငှက်ပျောတုံးချင်းအတူတူ သင်းက တစ်ခိုင်ပိုထွက်ချင်ရမလားဆိုတဲ့ ဒေါသတွေ အတုံးလိုက်အတစ်လိုက်ထွက်ပြီး ဘုန်းဘုန်းတောက်ဆီကို သူ့အစ်ကိုတော်ကို အရောက်ကြွခိုင်းပြီး သတင်းနှိုက်ခိုင်းပါလေရော။ လူ့လောကီကို ငြီးငွေ့တော်မူလို့ ဘုရားရိပ်၊ တရားရိပ်မှာ အေးအေးလူလူ သီတင်းသုံးနေတဲ့ အစ်ကိုတော်ဦးပဉ္ဇင်းခမျာ ညီတော်မောင် လူပြိုကြီး နားပူနားဆာတိုက်တာကို ကြားပြင်းကတ်ရှာလို့ ရွှေပြည်ပြန်ကြွမယ် တကဲကဲ လုပ်ပါလေရောတဲ့ အရပ်ကတို့ရေ။ သူရို့က လိုရင်းကို ဒါရိုက်မသွားရဲဘဲ သိုင်းဝိုင်းချဲ့ထွင်ပြီး အပီကြံချင်တဲ့ ထုံးစံကို ဗုန်းမှန်လို့ မပျက်ရအောင် ဖြေးဖြေးလေးလေးကြံစည်နေတုန်းမှာ ရှင်ကြားပူကျွန်းက ကငြိမ်းနိုင်ကတော့ ရွှေပြည်ကြီးမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ဆွေတော်ရှစ်သောင်း မျိုးတော်ပေါင်းတွေကို ဖုန်းတဂွမ်ဂွမ်ဆက်ပြီး ချဉ်ပေါင်ခြံကြီးရဲ့ ကျေးဇူးရှင်နတ်ကြီးဆီမှာ အပူကပ်ခိုင်းလိုက်တာ ဘာပြောကောင်းမလဲ စွံချက်ကတော့ ၀က်ဝက်ကိုကွဲရောဆိုပဲ။ သူ့ခမျာ စွံမယ့်စွံပြန်တော့လည်း သူများလို ချောင်းကြည့်ပြုံးပြန်၊ လျှောက်ပြန်သံပေး၊ ခြေအေးဝမ်းရောင် လုပ်စရာမလိုဘဲ အလိမ်မာအိမ်ပါကလေးတစ်ယောက်ကို သူ့အလုပ်ထဲတင်မကဘဲ၊ သူ့အခန်းထဲအထိ အရောက်ပို့ပေးလိုက်တာ ခမျာမှာ ချီးကလူရ သေးကလူရနဲ့ ကံကောင်းလွန်းလို့ ဗိုက်တစ်လုံးနဲ့ ဖိုးကျန်ရစ်မဖြစ်ရှာတာကလား။ မဲ့ဆောက်က ဘလော့ဂါ မောင်မျိုးတစ်ယောက်ကတော့ မဲ့ဆောက်မှာ ဂေါ်ရေးမလွယ်လို့ ဘန်ကောက်ပြောင်းပြီး ဂေါ်ရေးထွင်မယ်ဆိုပဲ။ ဗယ်လင်တိုင်းပြီးကတည်းက လူပြိုကြီးတစ်သိုက် ယောက်ယက်ခတ် လှုပ်ရှားလိုက်ကြတာ ခြေသွက်လက်သွက် ချဉ်ပေါင်ခြံကြီးပဲ စွံခြင်းကြီးဆိုက်သွားတော့ ခမျာများမှာ နေမထိ ထိုင်မသာ ဖြစ်ကြရှာပေမပေါ့လေး)။
သည်တစ်ပတ်အတွင်းမှာတင် ဘလော့ဂါ ချဉ်ပေါင်ခြံကြီးနဲ့ ဘလော့ဂါညီရဲသစ်တို့ တစ်ပတ်အတွင်း ဆက်တိုက်ဆိုသလို အိုဂိုဏ်းဝင်ဖြစ်သွားပြန်တော့ အသက်အစိတ်မှာ ပုခက်မချိတ်ရသေးတာကို တစ်သက်မနိပ်ဘူးရယ်လို့ အကျယ့်အကျယ် မငြိမ်းဖွယ်သောကတွေနဲ့ ဘလော့ဂါအပြိုကြီးတစ်အုပ်ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ချော ( အစိမ်းရောင်လွင်ပြင် )တို့ မိုးငွေ့တို့ အိုဘားမားတို့တိုင်းပြည်က စန်းထွန်းတို့တစ်သိုက်ခမျာ နေမထိ ထိုင်မသာ ဖြစ်ပြန်ပါလေရော။ အနှီသုံးယောက်ထဲမှာ အပြိုကြီးမိုးငွေ့တစ်ယောက်ကတော့ အိမ်ဂျယ်ခေါင်းစဉ်တပ် ပို့စ်ပေါင်းများစွာနဲ့ ရသေ့စိတ်ဖြေလုပ်နေရာက အနှီလိုပို့စ်တွေရေးနေလို့ပဲ ကျိန်းကျေဟန်တူရဲ့ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ အိန်တောင်ဆက်မဂျယ်တော့ဖို့ အကြံဖြစ်သွားတယ်ဆိုလား။ စန်းထွန်းတစ်ယောက်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့လထဲမှာပဲ ချစ်သူရဲ့မြို့တွေဘာတွေနဲ့ ကဗျာဆန်ဆန်ပို့စ်တွေရေးပြီး ကျွတ်တန်းဝင်ဖို့ စိတ်ကူးဟန်တူရဲ့။ သို့ပေမင့် ဂျိုးဂျိုးဂျိမ်းဂျိမ်း ခြိမ်းချင်တိုင်း ခြိမ်းပေမင့် တစ်ပေါက်နှစ်ပေါက် စိတ်ကူးပေါက်မှ ရွာတတ်တဲ့ မိုးသဘာဝကို နောကျေပြီးသား ဦးဟန်ကြည်ကတော့ အနှီပို့စ်ကိုဖတ်ပြီး ချဉ်ပေါင်ခြံကြီးတုန်းကလို ဘီးတပ်ပေးဖို့တောင် ယောင်လို့ စိတ်မကူးခဲ့ပေါင်ဗျာ။ သည်အပြိုကြီးနှစ်ယောက်ကမှ စိတ်ကူးဖဲရိုက်စရာ ရှိသေးရဲ့။ တစ်ပို့စ်မှာမှ အိုနံ့မရတဲ့ အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်ကြီးကျမှ ခက်ပါလေရော။ ဦးဟန်ကြည်တို့ရဲ့ အိုဂိုဏ်းတော်မြတ်ကြီးထဲကို ၀င်ခွင့်ရဖို့ဆိုတာ တော်ရုံသတ္တိနဲ့ ဘယ်ရလိမ့်တုန်းး)။ ဖဘပေါ်က မခိုင်လုံ အတင်းရပ်ကွက်ကရလာတဲ့ အတည်မပြုရသေးတဲ့ အတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ အနှီအပြိုကြီးတွေကလည်း ချဉ်ပေါင်ခြံကြီးရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်မှာ မင်္ဂလာဆုတောင်းရေးသယောင်ယောင်နဲ့ ချဉ်ပေါင်ခြံကြီးကို မ-လွှတ်လိုက်တဲ့ နတ်ကြီးအကြောင်း စုံစမ်းကြရှာတယ် ဆိုပဲ။
ဘိလပ်မှာ ဦးရီးတော်ဆီက ပြိုတရားချည်းလှိမ့်နာနေရတဲ့ မေဓာဝီကတော့ တရားပေါက် တစ်ယောက်ပါးပြီး ချဉ်ပေါင်ခြံကြီး စွံတဲ့သတင်းလည်းရရော တစ်ယောက်မှ ဈေးဦးမပေါက်သေးတဲ့ ပြိုဂိုဏ်းဝင်ဖြစ်ရတာ စိတ်နာလွန်းရှာလို့ ယောဂီဝတ်မယ်ချည်း တကဲကဲလုပ်နေပါရောလား။ ရှိစုမယ့်စု တူမလေးတစ်ယောက်ကို အားကိုးရအောင် ပြိုတရားစွတ်ဟောမိတဲ့ ဦးရီးတော်ခမျာ တူမဖြစ်သူကို အိုတရားပြောင်းဟောဖို့ စိုင်းပြင်းနေတယ်ဆိုလား။ ဆိုက်ပရပ်စ်က အဖြူရောင်နတ်သမီးကတော့ သည်လကုန်ရင် ရွှေပြည်ကြီးပြန်ရမယ်ဆိုတော့ ချဉ်ပေါင်ခြံကြီးဆီမှာ ဆေးနည်းသွားတောင်းဖို့ အဆင်သင့်လိုက်လေဆိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ ဖရဏာပီတိ ဂွမ်းဆီထိပြီး အချစ်တော် ဘေဘီကြောင်ကို လွှင့်ပစ်မယ် တကဲကဲလုပ်နေလို့ ဘေဘီမခမျာ အတင်းဖက်ထားရရှာတယ်ဆိုလား အရပ်ကတို့ရေ။
ချဉ်ပေါင်ခြံကြီးကမှ ပူတုန်းလေး ရှလူးစရာ လက်ငင်းရှိသွားပေမင့် မူးလို့တောင် ရှူစရာမရှိရှာတဲ့ ဘလော့ဂါ၊ ဘလော့ဂီ အပြိုကြီး၊ လူပြိုကြီးတွေကို သနားကရုဏာသက်ပြီး စွံဆေးကြီးဖော်ပေးချင်ပေမယ့်လည်း ခမျာများမှာ တစ်သက်လုံး ထိန်းလာတဲ့ ဣနြေ္ဒသိက္ခာကြီးတွေ တစ်ပိဿာခွဲလောက်နဲ့ အိုက်တင်ခံလွန်းနေပြန်တော့လည်း အခက်သားကလား။ အနှီအုပ်စုထဲမှာ ဟိုဆေးလုံး သည်ဆေးလုံးတွေ အဖော်အစပ်ကျွမ်းတဲ့ သူကြီးမင်းကတော့ သူစုထားတဲ့ ဆေးကျမ်းတွေထဲမှာ အိုဆေးမပါလို့ အတော်ဒေါဖောင်းနေတယ်ဆိုပဲ။ ခက်တာက ဆေးဘယ်လောက်စွမ်းစွမ်း လူကလည်း ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရှိဦးမှ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကုန်းဘောင်ခေတ်လောက်မှာ ရည်းစားကို “ ရဲဇား ” လို့ ခေါ်ကြသကိုး။ ရဲတဲ့လူမှပဲ အဆင်ပြေမယ်လို့ ဆိုလိုတာကြောင့် ဘလော့ဂါ လူပြိုကြီးများကတော့ ရွှေပြည်ကြီးကို အားချင်းပြန်လာပြီး ရဲထဲဝင်ကြမယ်ဆိုလား။ ဘလော့ဂီ အပြိုကြီးတစ်သိုက်ကတော့ စတိုင်ထွား၊ စတားဖြစ်ပြီး မလိုင်ပွား၊ သကြားဖြစ်စေဖို့ ဂျာရစ်ဒိုးကန်ဆီမှာ မော်ဒယ်လျှောက်နည်း သင်တန်းတက်ဖို့ စာရင်းပေးကြတယ်ဆိုလား အရပ်ကတို့ရေ။ သို့ပေမင့် စိန်ဂျာရစ်က အခုတလော ရွှေပြည်ကြီးရဲ့ ပထမဆုံးသော မော်ဒယ်လျှောက်ပွဲကြီးကို ကြည့်မိပြီး မော်ဒယ်လောကကို စိတ်ကုန်နေတာကြောင့် သင်တန်းပေးဖို့ ကိစ္စကို ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ရွှေ့ဆိုင်းထားတယ်လို့ ကြားရတာပါပဲ။
ပြိုဂိုဏ်းဝင်တစ်အုပ် အနှီလို အုံးအုံးကျွက်ကျွက်နဲ့ ခြေပုန်းရော၊ လေပုန်းပါခုတ်နေကြတုန်းမှာ ချဉ်ပေါင်ခြံကြီးက သွားပါများ ခရီးရောက်ဆိုတဲ့ ပို့စ်ကြီးတစ်ပုဒ်ကို ပြိုဂိုဏ်းဝင်တွေကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ တင်လိုက်ပြန်တော့ ရောဂါက ပိုသည်းပြန်ပါလေရော။ ချဉ်ပေါင်ခြံကြီး လုပ်ပုံကလည်းကြည့် “ သွားပါများ ခရီးရောက် ” ဆိုတဲ့ သူ့ခေါင်းစဉ်ကြီးကို အနက်ဖွင့်ရင် သူသွားလိုက်တာ ယောက္ခမအိမ်တန်းရောက်တယ်ဆိုတဲ့ အထာကြီးနဲ့ကိုး။ အနှီမှာတင် ပြိုဂိုဏ်းဝင်တစ်အုပ် ပေါက်ကွဲပြီး “ ဘာသွားပါများ ခရီးရောက်လဲ … ချဉ်ပေါင်ခြံကြီးပဲ ခရီးရောက်ပြီိး တို့များကျတော့ သွားပါများ ခြေထောက်ညောင်း ဖြစ်ကျန်ရစ်တာ ဘာသဘောလဲ … ညာသဘောလဲ ” နဲ့ ၀ိုင်းပြီးကောလိုက်ကြတာ မဒမ်ချဉ်ပေါင်ခြံ အသစ်စက်စက်ကလေးက တောင်းပန်ယူရတယ် ဆိုသကိုး။ မဒမ်ချဉ်ပေါင်ခြံက တောင်းပန်ပေးလို့ ကြေအေးမယ်မကြံသေးဘူး ချဉ်ပေါင်ခြံကြီးက “ တွေ့လား တို့များက အနှီလို ပိုင်တာ ” ဆိုတဲ့ မျက်နှာပေးမျိုးနဲ့ ခပ်ဖိန့်ဖိန့်ကြီး လုပ်နေလိုက်တာမှာ အိုဂိုဏ်းဝင်လက်သစ်ဖြစ်ကာရှိသေး ပြိုဂိုဏ်းကို ခြေစုံကန်ရသလားဆိုတဲ့ ပုဒ်မတပ်ပြီး ခုတ်မယ်ထစ်မယ် ပါးပါးလှီးမယ်လို့ ၀ိုင်းလာလိုက်ကြတာ မင်္ဂလာဆောင် အားပေးရအောင် အသင့်ရောက်နေတဲ့ အန်တီတင့်က တရားချမှပဲ ပြိုဂိုဏ်းဝင်တစ်အုပ် ခပ်ကုပ်ကုပ် တပ်ဆုပ်ခဲ့ရပါလေရောတဲ့။
အနှီလို တပ်ဆုပ်လာတဲ့ ပြိုဂိုဏ်းဝင်တစ်သိုက်ထဲမှာ ဘိလပ်က သူကြီးမင်း ကိုကိုမောင်က ချဉ်ပေါင်ခြံကြီး သူရို့ပြိုဂိုဏ်းကို အခုလို ခြေစုံကန်တာ အိုဂိုဏ်းသား ဦးဟန်ကြည် ချွန်တွန်းလုပ်တာပဲ ဖြစ်ရမယ်လို့ အစထောင်လိုက်တော့ နဂိုကတည်းကမှ ငှက်ပျောတုန်းကို မျက်စောင်းထိုးနေရတဲ့ သူရို့ဘ၀ကို စိတ်အနာကြီးနာပြီး မည်းမည်းမြင်ရာကို တရားခံလုပ်ချင်နေတဲ့ ဂိုဏ်းသားတစ်အုပ် ဦးဟန်ကြည် မည်းမည်းကြုတ်ကြုတ်ကို အလဲအကွဲအုပ်ဖို့ ချီတက်လာကြပါလေရောလား။ ( အမှန်ကတော့ သူကြီးမင်းက လူလည်ကျလွှတ်လိုက်တာကလား…တောသားချင်းအတူတူ ရိုင်းရိုင်းပင်းပင်းမရှိဘဲ သူ့ကိုတော့ ဘေးဖယ်ပြီး ချဉ်ပေါင်ခြံကြီးကိုပဲ အိုဂိုဏ်းထဲဆွဲသွင်းရပါ့မလားလို့ မကျေမချမ်းဖြစ်နေတာနဲ့ ရောပြီးနှိပ်ထည့်တာရယ်း)
ဟော…ပြောရင်းဆိုရင်း ပြိုဂိုဏ်းဝင်တစ်အုပ် ဦးဟန်ကြည်တောခိုနေတဲ့ ဖုန်ပဒေသာမြို့ကို အရောက်လာဖို့ ဗီဇာလျှောက်နေကြပြီမို့ အန်တီတင့်ရေ…တစ်ပြည်တစ်ရွာရောက်နေပေမယ့် ညီလာရင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အနှီပြိုဂိုဏ်းသားတွေကို အပီသာဟောက်လွှတ်ပေးတော်မူပါဦးဗျားး)။ ။
ရည်ညွှန်းလွှာ . . .
၂ . .၃. ၂၀၁၃ ( စနေနေ့ ) မှာ မဒမ်ချဉ်ပေါင်ခြံအသစ်စက်စက် မသန်းထွဋ်စိုးကို လက်ချင်းတွဲပြီး ဦးဟန်ကြည်တို့ရဲ့ အိုဂိုဏ်းတော်ကြီးထဲကို ဆိုင်းမဆင့်ဗုံမပါ ဇွတ်အတင်းဝင်လာပါတဲ့ ကိုဘကြိုင် ( ချဉ်ပေါင်ခြံ ) ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်အတွက် ဘလော့ဂါ၊ ဘလော့ဂီ ပြိုဂိုဏ်းဝင်များကို ပိန္နဲပင်ခလုတ်တိုက်ထားတဲ့ တောင်မလွတ်မြောက်မလွတ်ပို့စ်နဲ့ လက်ဖွဲ့လိုက်ပါသဗျား…ကလောင်သွားမှာ အချောင်ကားသွားတဲ့ ဘလော့ဂါ၊ ဘလော့ဂီအပေါင်းတို့ကလည်း ဆန်စဉ်ရာ ကျည်ပွေ့လိုက်သွားတဲ့ ဦးဟန်ကြည်ကို ခွင့်လွှတ်တော်မူကြပါဦး…
သမီးအစိတ်၊ မြေးတစ်ကျိတ်ကျော် ရစေသော်ဝ်း)
ပို့စ်ခေါင်းစဉ်ကို “ ချဉ်ပေါင်ခြံထဲ သန်းဝင်ခြင်း ” လို့ တပ်ရင်ကောင်းမလား စဉ်းစားလိုက်မိပါသေးရဲ့…အနှီလိုသာ တပ်လိုက်မိရင် ချဉ်ပေါင်ခြံကြီးရဲ့ ချစ်စွာသော သန်း ( မသန်းထွဋ်စိုး ) က ဦးဟန်ကြည်ကို ဒေါသတွေ အချောင်းလိုက်ထွက်ပြီး ကလေးကင်ပွန်းတပ်ကျရင် လာအားပေးမယ့် ဦးဟန်ကြည်ကို ကျည်ပွေ့နဲ့ဆော်လွှတ်လိုက်မှာ တွေးကြောက်မိတာကြောင့် “ ချဉ်ပေါင်ခြံကို ကြိုဆိုခြင်း ” လို့ စားကောင်း၊ သောက်ကောင်းတဲ့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပေးလိုက်ပါကြောင်း…း)
Posted by Han Kyi at 10:07:00 pm 21 comments: